Oman: Notanana ilay bilaogera Muawiya Alrawahi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2019 3:39 GMT
Muawiya Alrawahi. Saripikan'i Jillian C York
Notaterina tao amin'ny Twitter fa notanana noho ny bilaogin-dahatsoratra sy ny sioka sasantsasany izay nanakianany ny Sultan Qaboos bin Said, mpitondra an'i Oman ilay bilaogera Omani mivantambantam-piteny Muawiya Alrawahi (nitafatafa tamin'ny Global Voices eto ), fantatra amin'ny heviny mampiadihevitra.
Nanoratra ny marainan'ny 6 Febroary 2012 ny mpisera Twitter Ammar Almamari (@omanammar):
Nijanona efa ho roa andro tany amin'ny Sampan-draharaha Manokana ho an'ny Polisin'ny Mpanjaka ao Oman ilay bilaogera Omani Muawiya Alrawahi , noho ny lahatsoratra izay navoakany vao haingana
Noho ny bilaogin-dahatsoratra lavabe nivoaka tamin'ny 3 Febroary mitondra ny lohateny hoe “Dinam-Pamonjena” (izay efa voafafa saingy misy kopia miafina azo jerena eto [Ar]) no nahatonga izany. Niresaka am-pahibemaso momba ny zavatra maromaro i Muawiya tao anatin'izany, anisan'izany ny fampijaliana tamin'ny fanararaotana ara-nofo azy tamin'ny mbola zatovo, ny fandraisany anjara vao haingana tamin'ny Sampandraharahan'ny Filaminana Anatiny ao Oman (ISS), ny fankasitrahany sy ny fifandraisany tamin'ny ISS Jeneraly Borigadin'i ISS Khamis Al Ghraibi teo aloha (ankehitriny nogadraina noho ny fiampangana azy ho mitsikilo ho an'i Emira Arabo Mitambatra), ny tsy fananany finoana ara-pivavahana, ny fahadisoam-panantenany tamin'i Oman, ary ny tsy fahatokisany ny mpitondra Sultan Qaboos.
Nofaranan'i Muawiya ny lahatsoratra tamin'ny filazana hoe:
Afaka amin'ny zava-drehetra aho
Afaka aho izao
Nanakiana ihany koa ny Sultan Qaboos sy ny toe-draharaha politika tao Oman ny sioka nalefan'i Muawiya, ary niantso ny faharavan'ny fitondran'ny Hoala rehetra izy ankoatra izany .
Namoaka lahatsoratra ho firaisankina tamin'i Muawiya ny bilaogera Ferass Alryami :
Tsy manana fahefana afatsy ireo teny izay hovakian'ny olona sasany na tsy horaharahian'ny olona sasany aho… Saingy eto dia maniry ny handefa hafatra fohy ho an'ny namako Muawiya aho avy aty an'efitra figadrako lehibe ho any amin'ny efitra figadrany kely (na mifamadika amin'izany):
“Somary tsy mivantambantana ny teny tao amin'ny lahatsoratrao farany; Angamba tsy niantefa tany amin'ireo olona izay tianao niantefany izany. Saingy tsy maintsy mamakivaky ny rindrin'ny fahanginana izany teny izany mba hanambarana ny sasany tamin'ny zavatra nampijaly anao, Muawiya.
Marina fa tsy miombon-kevitra ara-tsaina sy ara-politika isika, ary nalahelo toy ireo olona hafa aho, saingy matoky amin'ny tsy fananan'ny zavatra nosoratanao tsiny aho “
Nanamafy ny olona hafa fa maro loatra ny fihoaram-pefy nataon'i Muawiya, indrindra rehefa niresaka momba ny finoana Islamo izy.
Mpanao gazety Omani roa no nogadraina noho ny “fanevatevana” ny Minisitry ny Fitsarana ao amin'ny firenena tamin'ny alàlan'ny famoahana ny fiampangana kolikoly misy ao amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana. Mamaritra ny sazy ho an'ireo izay manozongozona ny “voninahitry ny fanjakana” ny fehezan-dalana famaizana izay vao nasiam-panitsiana tao Oman, ary mandràra ny “fanaparitahana izay rehetra mety hanakorontana ny filaminam-bahoaka, anatiny sy ivelany ny andinin-dalana mifehy ny gazety sy famoahan-dahatsoratra .”